ला लिगा ह्याट्रिकमा मेस्सी भन्दा रोनाल्डो कसरी प्रभावशाली !! - Experience Best News from Nepal
ला लिगा ह्याट्रिकमा मेस्सी भन्दा रोनाल्डो कसरी प्रभावशाली !!
प्रकाशित मिति : मङ्ल, मंसिर २४, २०७६
गए साता बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सीले पुर्बी मड्रिड एबं हाल युभेन्ट्स आवर्द क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ला लिगा ह्याट्रिक रेकर्ड भंग गरेका छन् । मेस्सीले हालै मात्र रोनाल्डोको रेकर्ड तोडेका हुन् तर मेस्सी भन्दा रोनाल्डोको ह्याट्रिक तथ्यांक धेरै प्रभावशाली रहेको विभिन्न श्रोतले बताएको छ ।
क्यटालान क्लब बार्सिलोनाले मालोर्कालाई ५-२ को फराकिलो गोल अन्तरले जित हात पारेको रात मेस्सीले आफ्नो ३५ औ ह्याट्रिक पुरा गरेका हुन् । ला लिगा इतिहासमा रोनाल्डोले बनाएको ३४ ह्याट्रिक गोल रेकर्ड मेस्सीले ८३ औ मिनेट उक्त मलोर्का विरुद्धको खेलमा तोडेका थिए ।
तर मेस्सीले बनाएको उक्त रेकर्डका निम्ति मेस्सीलाई ४६२ खेल कुर्नु पर्यो भने ३४ औ ह्याट्रिक रोनाल्डोले २८८ औ खेलमा नै पुरा गरेका थिए । उक्त आकडाकै कारण ला लिगा ह्याट्रिक इतिहासमा मेस्सीको भन्दा रोनाल्डोको ह्याट्रिक स्तर प्रभावशाली मानिएको हो ।
मेस्सीले राखे यी ८ सर्त र माग !! पुरा नभए मेस्सिले बार्सिलोना छाड्न सक्ने
रोनाल्डोले पुरा गरे सिरी ए मा १४ गोल !!
बार्सिलोनामा एक्लो र थकित महसुस गरिरहेको छु : लिओनेल मेस्सी
रोनाल्डो एक मात्र खेलाडी जसले यी दुई क्लबलाई गरेका थिए ५ गोल !!
बार्सिलोनाको बच्चा शैली कै कारण २ गोल मड्रिडलाई उपहार बन्यो : मेस्सी
रोनाल्डोलाई नयाँ चुनौती, जर्मन लिग जिताउने !! के रोनाल्डो बायर्न जादै छन् ??
लुकाकुको दुई गोलमा इन्टर मिलानको सानदार जित !!
टिमका लागि गोल जोगाएर रेड कार्ड, उनै बने म्यान अफ द म्याच !!
जावी आउने विषयमा अन्तराष्ट्रिय मिडियाले के भन्दै छ !! यस्तो छ भित्री रहस्य